Salafiyada, Shiiq Maxamud Shibli iyo Dagaalka Gaashaan-Buurta Cusub | War La Helaa Talo La Helaa
Home WARARKA MAANTA Salafiyada, Shiiq Maxamud Shibli iyo Dagaalka Gaashaan-Buurta Cusub
Salafiyada, Shiiq Maxamud Shibli iyo Dagaalka Gaashaan-Buurta Cusub
Marka laga soo tago khilaafka la xiriira fahamka diinta iyo xifaaltanka kooxaha, Sheikh Maxamuud Maxamed Shibli waa caalim Soomaaliyeed, wuuna ahaan doonaa waligiis. In aad wax isku khilaafsan tihiin iyo in aad isku waafaqsan tihiinu waa iska arin kale.
Sida aynu wada ognahay, marka uu dagaal dhex maro dad waxaa dhacda in hub walba la isu adeegsado si qof walba/qola walba u gaarto guul; saa guul darrado way qaraartahaye. Intaa kadib, wadaadada Salafiyadu waxay muujiyaan, waligoodna muujin jireen, ad adeeg aan loo baahnayn marka ay la dhaqmayaan kooxaha kale, ama shaqsiyaadka ay iskula dhacaan fahamka diiniga ah. Haddii ay ogyihiin iyo haddii kalaba, arinkaas dantoodu kuma jirto mustaqbalka fog. Ad adeegu wuxuu dhalaa ad adeeg kale iyo falcelin kulul.
Bini’aadamku wuxuu u samaysan yahay in uu mar walba xiiseeyo waxyaabaha cusub, waana tan keentay in ay Soomaalidu isaga hayaamaan mowlacyadii Suufiyada dhamaadkii qarnigii tegay markii ay Salafiyadu timid dalka. Kadib markii ay Suufiyada cagta mariyeen, waxay isku dayeen in ay dadka oo dhan ka dhigaan Salafiya, balse way ku guuldareysteen.
Waa arin dabiici ah oo dadka oo dhan lagama wada dhigi karo hal koox, lagumana wada qanci karo hal manhaj. Hadda, waxaa aloosan dagaal wajiya badan oo ka dhexeeya isbahaysi dabacsan- loose coalition iyo Salafiyada.
Isbahaysiga dabacsan waxaa ku jira dad aad ukala afkaaro duwan, balse ka midaysan in Salafiyada lagu fadhiisiyo kursi caadi ah. Isbahaysigaa waxaa kamid ah arday badan oo kusoo wax baratay dugsiyada yo manhajka Salafiyada, balse haatan la yaaban fahmaka ay nolosha iyo diinta ka haystaan macallimiintoodii hore. Waxaa kamid ah Suufiyo ku jirta soo rogaal celin, Ikhwaan ay horay u geliyeen ciriiri, waxgarad madax-bannaan, fannaaniin, cilmaaniyiin iyo Soomaali Diinta Islaamka ka hayaamay. Waxaa la gudboon Salafiyada, haddii ay rabaan in ay sii joogaan ayagoo leh xooggooda iyo haybaddooda, in ay dabcaan, dib u eegaan qaar ka mid ah waxyaabaha lama taabtaanka u ah, la qabsadaan isbeddelka socda, dadka kalena ku saameeyaan naxariis iyo dulqaad.